Noocyada Jabsadeyaasha Kombuutarka u Kala Baxaan | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Maxamed Cumar Maxamed — September 27, 2020
Waa kuma jabsade?
Badanaa markaad maqasho erayga Hacker waxaa kugu soo dhacayo inuu yahay dambiile tuug ah oo si sharci darro ah dadka u dhaco asagoo adeegsanyo kombuyutarka.
Hadaba Hacker ama jabsade waa shaqsi leh xirfad dheeri ah, una isticmaalo kombuyuutar-ka si kabaxsan sidii loogu tala galay.
Hacker-ku waxa uu noqon karaa mid wanaagsan, mid xun iyo mid aannan labada dhinacba meel heesan. Erayga Hacker badanaa waxa uu u taaganyahay qof xirfadiisa u isticmaalo si uu helo xog aanan loo fasaxin ama gudaha ugalo system ama nidaam’ aanan loo ogoleyn asagoo wax fasax ah heysan.
Tusaale ahaan jabsadaha waxaa laga yaabaa inuu jabsado system-ka dhan oo ay shirkad ku shaqeeneysay ama uu jabsado qof ciwaankiisa asagoo dhibaato ugeysanayo qofkaas sumcadiisa.
Hacker-ku waxa uu u kala baxaa seddex qeybood oo kala ah:
White Hat Hackers “Koofiyad cad”: Koofiyad cad waa kuwa wanaagsan ahna hackers u shaqeeya qaab sharci ah, ahna kuwa difaaca sytem-yada shirkadaha ama u shaqeeya wadankooda si ay u difaacaan in la jabsado xogaha dalkooda waxaana loo yaqaanaa Ethical Hackers.
White hat hackers badanaa waxa ay qabtaan ama kahor tagaan weerarada lagu soo qaado shirkadaha ay u shaqeeyaan ayna u xaliyaan meelaha uu ka jilicsanyahay system-ka shirkadaha ay u shaqeeyaan. Shirkadaha sida Facebook, Google iyo Microsoft ayaa isticmaalo Hacker-ada noocaan ah.
Black Hat Hackers “Koofiyad Madaw”: Black hat hackers ama koofiyad madaw waa kuwa aadka u xun ee u isticmaala kombuyuutarka si sharci daro ah si ay u helaan xoggo aanan loo ogoleyn, waa kuwa ku beero virus systemka shirkadaha, ahna kuwa jabsado bank-yada si ay u dhacaan lacago aad u fara badan, waxaa loo yaqaanaa dambiilayaasha kombuyuutarka.
Waxaa jirro kooxo badan oo koofiyad madaw ah caalamka ka ah dambiilayaal waa weyn kuna xukuman dil meeshii lagu arko.
Black hat hackers waa nooca hacker-ada ugu halista badan ee u adeegsado kombuyuutarka si ay u saameeyaan shirkadaha waaweyn, dowladaha iyo shaqsiyaadka caanka ah. Black hat hackers-ka kooxaha ugu caansan waa kooxda Anonymous, Syrian electron army iyo Tarh Andishan.
3. Grey Hat Hackers “koofiyad cawl”: Grey hat hackers ama koofiyad cawl waa hackers-ka dunida aanan la saadaalin karin marba dhinac lug kula jira marna waxey u dhaqmaan sida black hat oo sharci darro ah marna waa white hat oo waxay ku dhaqmaan si sharciyeesan.
Shirkadaha badanaa aad bay isaga ilaaliyaan Grey hat maadamaa aanan lagu tashan karin ee berri ka maalin dhib u geysan karaan shirkada. Grey hat badanaa waxa ay lashaqeeyaan dowlada siiba sirbaaryaasha dalalka caalamka sida FBI, CIA iyo SIS.
Tags: Noocyada Jabsadeyaasha u Kala Baxaan
Next post Isu-dhigan: Xaalad Aan Caadi Ahayn - Xal aan caadi ahayn
Previous post Eraybixinta Soomaaliga
About the Author Maxamed Cumar Maxamed
Waa qoraa da'yar oo ka tirsan bahda qoraayaasha ee Afrikaan.so, ku taqasusay cilmiga tiknoolajiyada, ahna qoraa in badan wax ka qoray tiknoolajiyada iyo documentries-ka. Waxuu cilmiga IT-ga kabartaa jaamacada Hawassa ee dalka Itoobiya, waxuu sidoo kale shahaadada CCNA kaqaatay shirkada caalamiga ah ee Cisco.